प्रजातान्त्रिक यात्रा – Famous Nepal
Posted on February 19, 2018 at 11:46 am by फ्यामोस नेपाल
फागुन ७ ले नेपाली राजनीतिका विभिन्न रूपमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवसको मान्यता पाउँदै आएको छ । ०७ सालको जनक्रान्तिका बारेमा राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा रहेको छैन । नेपाली काँग्रेसले गरेको यो सशस्त्र आन्दोलन १०४ वर्ष लामो जहानियाँ शासनको अन्त्य गर्न सफल भएको थियो । सशस्त्र क्रान्ति राजनीतिक सहमतिमा टुङ्गिएको थियो । भारतको मध्यस्थतामा दिल्लीमा भएका कारण पछि दिल्ली सम्झौता भनिएको यो सहमति धोका हो भन्नेहरूमा आन्दोलनमा सहभागी नभएका दलहरू पनि पछि निस्के तर आन्दोलनमा रहेरै डा. केआई सिंहले सहमतिविरुद्ध विद्रोह गरे । उनले न त सम्झौता उल्टाउनेगरी आन्दोलन जारी राख्न सके, न त प्राप्त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन उनको भूमिका रह्यो । त्यसपछि उनले कहिल्यै फर्केर काँग्रेसलाई सहयोग गरेनन् । उनको राजनीतिले फरक बाटो लियो । राजा, राणा र काँग्रेसबीच भएको सहमति नमान्ने डा. सिंह अन्ततः राजाका सहयोगी बने ।
माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह, उसका शब्दमा जनयुद्धमा १० वर्षको समय व्यतीत भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा सुरु गरिएको जनयुद्धमा १७ हजार नागरिक यो वा त्यो पक्षबाट कालको पासोमा चढे । अन्ततः विद्रोहको विसर्जन राजनीतिक सहमतिमा नै भयो । माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा लोकतन्त्र बहाली भयो । यो यात्रा माओवादीले पछिल्लोपटक उठाएको गणतन्त्रसम्म पुग्यो । संविधानसभाबाट संविधान लेखियो । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन सक्यो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । २०५२ साल फागुन १ मा माओवादीले सुरु गरेको जनयद्धको वास्तविक पटाक्षेप २०७४ फागुनमा उसकै सहयोगमा बन्दै गरेको सरकारसँगै हँुदै छ । संसदीय अभ्यासका २७ मध्येको २२ वर्ष यसरी व्यतीत भएको छ ।
नयाँ आईजीपीको दौड तीव्र, तीनमध्ये को आगाडी ?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा संगठन प्रमुखको अनिर्वाय अवकाश हुन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा दुवै संगठनमा नयाँ संगठन…
बुद्धको पाइला देखेर किन छक्क पर्यो ज्योतिषी ? , पूरा पढ्नुहोस्
असार महिनाको तातो अपराह्न थियो । भगवान् बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूका साथ कतै गइरहनुभएको थियो । उहाँ हिँड्नुभएको बाटोमा कुनै पनि…